ဗိမာနျတျောရတနာ Hunt ကဂိမ်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဗိမာနျတျောရတနာ Hunt ကဂိမ်း
ဗိမာနျတျောရတနာ Hunt ကဂိမ်း APK ကို
"ThoughtShastra Solutions ဗိမာနျတျောရတနာ Hunt ကဂိမ်း, အစားဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်သောဂိမ်းများ၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်၏။ "
- AppsZoom ပြန်လည်သုံးသပ်
သင်မှတ်ဉာဏ်, ပဟေဠိ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ပြိုင်ကားဂိမ်းပျင်းဖြစ်ပါသလား
ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင်ထို့နောက် Shiva ဗိမာန်တော်၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရှေးဟောင်းရတနာမှဦးဆောင်ရတနာလမ်းကြောင်းလေ့လာစူးစမ်းရန်သင့်စွန့်စားခရီးစတင်။ ဗိမာနျတျောရတနာတစ်ဦး, စွဲလမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဂိမ်းအသစ်ကစားအတူအကောင်းဆုံး android ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းခြေရာကောက်နည်းပညာများကို အခြေခံ. ဖြတ်တောက်-အစွန်းလုပ်ခဲ့ပြီး Reality နှင့်တည်နေရာအသုံးချ။ တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင်သင့်ရှိပါ။ ဘဏ္ဍာကိုလမ်းကြောင်းကိုအလိုအလျောက်အားဖြင့်တစ်ဦးတည်းကစားပျော်စရာရှိသည်သို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလမ်းကြောင်းမျှဝေနေဖြင့်အုပ်စုတစုထဲမှာကစားပျော်မွေ့။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့လေးတွေကခက်ခဲအိပ်ရာထဲကရဖို့ရှာတွေ့ပါလျှင်ဒီဂိမ်းကသင့်အတွက်ပါပဲ
1 ။ တစ်ဦးရတနာကာကွယ်ပေးသူအဖြစ်ရတနာ Interactive မှမြေပုံ (အဆောက်အဦးအပြင် Mode ကို) သို့မဟုတ်ညွှန်မှတ် (မိုးလုံလေလုံ Mode ကို) အားမရသဖြင့် အသုံးပြု. လူ့ကိုပျော်စရာရှိသည်နှင့်မုဆိုးကိုစိန်ခေါ်
2 ။ တစ်ဦးရတနာ Hunter စိန်ခေါ်တက် ယူ. ရတနာ Guardians တည်နေရာအားဖြင့်၎င်း, ပေးထားသောအချိန်ကန့်သတ်မှုအတွက်ရတနာလမ်းကြောင်းရှာဖွေစူးစမ်းပျော်မွေ့အဖြစ်
3 ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်အေးမြအိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင်ရတနာ Guardians အဖြစ်အသက်ရှင်လျက်ရောက်ကြောင်းကိုမြင်
4 ။ ကွန်ယက်သို့မဟုတ် Bluetooth စနစ်များ သုံး. လမ်းကြောင်းဝေမျှမယ်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ
II ကို။ ဂိမ်းအကြို-လိုအပ်ချက် (သင်မိုးလုံလေလုံ Mode ကိုကစားနေကြတယ်သာလျှင်)
အောက်ကလင့်ခ်ကနေ Download လုပ်များနှင့်ပုံနှိပ်အမှတ်အသားဖိုင်:
III ကို။ ကစားနည်း?
1 ။ ရတနာ Trail Creating:
တစ်ဦး။ Choose "ရတနာကာကွယ်ပေးသူ" ကစားသမားအခန်းကဏ္ဍ
ခ။ အဆောက်အဦးအပြင် mode မှာအမျိုးမျိုးသောနေရာများမှာဘဏ္ဍာကိုအုပ်ထိန်းသူများနေရာပေးရန် Interactive မှမြေပုံသုံးလျှင်
က c ။ မိုးလုံလေလုံ mode မှာဘဏ္ဍာကိုအုပ်ထိန်းသူတည်နေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက္ကူအမှတ်အသားများနေရာပါလျှင်
2 ။ ရတနာ Trail Exploring
တစ်ဦး။ "ရတနာ Hunter" ကစားသမားအခန်းကဏ္ဍ Choose
ခ။ လာမယ့်ဘဏ္ဍာကိုအုပ်ထိန်းသူများ၏တည်နေရာထုတ်စစ်ဆေးပေးရန် Interactive မှမြေပုံသုံးပါ။ သငျသညျလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ပြောင်းရွှေ့လျှင်အတည်ပြုရန်သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာအမှတ်အသားတစ်ခုလမ်းကြောင်းထားပါ။
က c ။ သငျသညျလညျးသဲလွန်စရရန်ဘဏ္ဍာကိုအုပ်ထိန်းသူ icon ပေါ်တွင်သာပုတ်နိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ညာဘက်တည်နေရာမှာဘဏ္ဍာကိုအုပ်ထိန်းသူကိုရှာဖွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသား (မိုးလုံလေလုံ Mode ကို) သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် (အဆောက်အဦးအပြင် Mode ကို) scan ။
ဃ။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အုပ်ထိန်းသူအပေါ်ထိပုတ်ပါ။ အနိုင်ရအားလုံးအုပ်ထိန်းသူများကိုရှာပါ။
IV ။ သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks:
1 ။ မြင်ကွင်းကိုထွက်ဝေ့ဖို့အပြန်အလှန်မြေပုံပေါ်တွင်ညာဘက်အပေါ်ဆုံး button ကိုသုံးပါ
2 ။ "လက်လှမ်းမမှီ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်ပ mode မှာလက်လှမ်းမမှီပါနေရာများမှာတည်ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်း Skip ရတနာ Guardians
3 ။ တစ်ခုတည်းသောစက်ကိရိယာနှင့် Group မှ - သင်ဘဏ္ဍာကိုလမ်းကြောင်းဖန်တီးစူးစမ်းဖို့တူညီတဲ့ device ကိုအသုံးပွုနိုငျ
4 ။ မျိုးစုံ devices များနှင့်အတူ Group မှ - ရတနာကာကွယ်ပေးသူ "Share" menu ကို option ကိုအသုံးပြုပြီးအခြား devices အတူလမ်းကြောင်းမျှဝေနိုင်ပါသည်
1 ။ ဒီဂိမ်းကို (ရတနာမုဆိုးလမ်းကြောင်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပတ်ပတ်လည်ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကပါဝင်ပတ်သက်
2 ။ မိုးလုံလေလုံ Mode ကိုအဘို့အသငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက္ကူအမှတ်အသားများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်
3 ။ အဆိုပါဂိမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာဂိမ်းကစား၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသည်။ တည်နေရာအချက်အလက်များကို backend server သို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စမဆိုပေါ်မှတဆင့်ကူးစက်သောသို့မဟုတ်မသိမ်းထားပါ။
VI ကို။ EULA မှ Link ကို:
VII ။ ဂိမ်း Credit:
အဆိုပါပျော်စရာ Explore - အမဲလိုက်ခြင်းကိုစတင်ကြပါစို့ စွန့်စားမှု, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း, ပျော်စရာအာမခံကြသည်!
v1.0 - သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဗားရှင်း
26.35 ကို MB